मन्त्री लालबाबु पण्डितको यस्तो चेतावनीले प्रधानमन्त्री कार्यालय हल्लियो ! - sandeshpost
Home > राजनीति > मन्त्री लालबाबु पण्डितको यस्तो चेतावनीले प्रधानमन्त्री कार्यालय हल्लियो !
मन्त्री लालबाबु पण्डितको यस्तो चेतावनीले प्रधानमन्त्री कार्यालय हल्लियो !
March 13, 2018 March 13, 2018 admin89
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्लाष्टिकका झोलाको उत्पादन र वितरण बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसैबीच मन्त्री पण्डितले प्लाष्टिकका झोलाको उत्पादन र वितरण बन्द गर्ने चेतावनीसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस बिषयमा कुराकानी चलेकाे छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्राेतले सञ्चारकेन्द्रलार्इ दिएकाे जानकारी अनुसार प्लाष्टिकका झोलाको उत्पादन बन्द हुन नदिन यसअघि पनि चलखेल भएकाे र अहिले पनि मन्त्री पण्डितले त्याे कुरा उठाएपछि फेरी चलखेल सुरू भएकाे हाे । उद्धोगीहरुको व्यवसाय नै धरापमा अर्ने भन्दै यस्तो चलखेल सुरु भएको स्रोतले बतायो ।
तर मन्त्री पण्डितले भनेअनुसार प्लास्टिकको झोला बन्द गराउने पक्षमा प्रधनमन्त्री ओली पनि सहमत छन् । प्रधानमन्त्री नै पोजेटिभ देखिएपछि अन्य कर्मचारीहरुले चलखेल गरेपनि मन्त्री पण्डितको प्लास्टिकका झोला बन्द गराउने निर्णय कार्यन्वयन हुनसक्ने स्रोतको भनाई छ ।
यसअघि ०७२ भदाैमै सरकारले प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि अझैसम्म कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन । सरकारको उक्त निर्णयले यस पेशा व्यवसायमा आश्रित ३५ हजार भन्दा बढीको रोजगार समेत धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए ।
सरकारले विना विकल्प व्यवसायीसँग छलफल र संवाद नै नगरी प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धितको निर्णयमा आफुहरु असहमत रहेको उद्योगीहरुले बताएका थिए। वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रदुषण फैलाउन प्लाष्टिकका झोलाको अहम् भूमिका रहेको भन्दै वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भने सरकारले ३ महिनाका लागि छुट दिएको थियो।
जहाज दुर्घटनामा परेर पनि बाँचिन् अछाम मंगलसेनकी प्रिन्सी धामी
भोलेबाबा बनेको दुई महिनाभित्रै दर्जनभन्दा बढी युवतीमाथि चौधरीले यौन शोषण गरेको स्थानीयले मुख खोलेका छन् ।
श्रीमान बिदेश भएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई जुत्ताको माला र २… (138)
सैफअलि खान की छोरीले नेपाली बोल्दै नेपाली दर्शकलाई यस्तो भनेपछि… (92)
यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ? (50)
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन… (42)
सिंगापुरमा पानीमा आगो लगाइन् संजय दत्तकी पत्नी मान्यताले, हेर्नुहोस् ६… (30)